Jimicsiyada Adkeynta - Vondt.net
Kaydinta Nooca: Jimicsiyada Adkeynta
4 jimicsi oo fidsan oo ka dhan ah dhabarka adag
12 / 06 / 2016 /0 Comments/i tayada Articles, Jimicsiga iyo Jimicsiga, Soo noqo, Jimicsiyada xoog, iskala Layliyo/av waxyeelladayda
4 jimicsi fidin ah oo ka soo horjeeda dhabarka adag
Ma waxaad dhib ku qabtaa dhabarka adkaanta? Halkan waxaa ah 4 jimicsi oo fidin ah oo kaa caawin kara inaad la dagaallanto xannuunka iyo adkaanta dhabarka. Isku-fidintu waxay kordhin kartaa dhaqdhaqaaqa waxayna yareyn kartaa murqaha murqaha. Layligani waxaa si gaar ah loogu talagalay in lagu kordhiyo dhaqdhaqaaqa iyada oo ujeedadu tahay in la bixiyo shaqo wanaagsan, ka yar myalgias iyo xanuunka laabatooyinka oo ay weheliso tamar badan nolol maalmeedka.
Dhabar xanuun iyo xanuun adag ayaa waxbadan burburin kara nolol maalmeedka iyo shaqada labadaba. Inteena badan waxyar ayaynnu sugaa waxoogaa yar ka hor inta aan wax ka qaban dhibaatada dabadeedna inta badan waxay u gudubtay heer ay u baahan tahay dadaal dheeri ah si wax looga qabto - sidaa darteed waxaan marwalba kugula talineynaa inaad astaamaha iyo dhabarka xanuunka si dhab ah u raadso daaweyn, iyo sidoo kale inaad ku bilowdo jimicsiyo caadiya si aad dhibaatada uga hortagto. Waxaan kugula talineynaa inaad adiguna, jimicsiyadaan fidinta ka sokow, aad isku daydo leyliskan garabka og tallaabooyinkan wanaagsan haddii aad la halgameyso muruqyo iyo xanuuno wadajirka ah.
MUUQAAL: 4 Dhar Lebis ah oo Looga Soo Horjeedo Stiff Back (Muuqaal hoose ka daawo)
YouTube: Xor ayaad u tahay inaad iska diiwaan gasho YouTube channel. Halkaan waxaad ka heleysaa barnaamijyo jimicsi oo wanaagsan iyo talooyin caafimaad. Fiidiyowgaan waxaad ku arki kartaa afarta jimicsi ee aan ku soo bandhignay qodobkaan - oo leh sharraxaad.
1. Kursiga iyo fidinta Muruqa ("Gluteal Stretch")
U jiifso dhabarkaaga iyadoo dhabarkaagu dhulka ku yaal. Ka dib lugahaaga kor ugu taag dhankaaga ka dibna mari hal lug lugta kale - ka dibna wareeji sinta oo u soo jiido lugta dhankaaga illaa aad ka dareento inay si fiican ugu kala bixinayso labada dambe ee bowdada iyo kursiga. Tani waa jimicsi weyn maadaama ay fidineyso muruqyo dhowr ah oo badanaa ku lug leh xanuunka dhabarka - oo ay ku jiraan glutes iyo piriformis. Kordhi fidinta 30 ilbiriqsi oo ku celi 3-4 nooc. Kadib jimicsiga ku samee dhinaca kale.
Kala bixi dhabarka hoose
U jiifso dhabarkaaga labada lugood oo toosan. Ka dib hal lug ah dhankaaga kor ugu qaad oo si tartiib ah dhankaaga ugu soo jiida - sida ugu habboon waa inaad ka fogaataa leexashada badan ee dhabarka markaad sameyneyso fiditaanka. Jimicsiga waa in laga dareemaa dhabarka kursiga iyo laf-dhabarka (dhabarka hoose). Ku hay 30 ilbiriqsi ka badan 3-4 xirmo.
3. Jimicsiga cat-geel
Jimicsiga geela bisadu waa jimicsi abaabulan oo fiican oo dhaqdhaqaaq badan taasoo siineysa dhaqdhaqaaq badan dhabarta. Wuxuu fidiyaa wuxuuna siinayaa dabacsanaan badan xagga dhabarka, feeraha iyo qoorta. Waa jimicsi cajiib ah kuwa u baahan inay jilicsanaadaan qoorta iyo dhabarka. Bilow inaad ku taagnaato afarta dhinacba, ka dibna dhabarkaaga u dhig si tartiib ah dabaqa kahor aayar, laakiin si adag ugu riix dhabarkaaga dhanka saqafka. Ku soo celi jimicsiga 8-laab oo kabadan 10-3 goosgoos ah.
Fidinta dhabarka fadhida (fidinta dhabarka hoose, piriformis iyo kursiga)
Fadhiiso kursi sariirta ama wixii lamid ah qaab wanaagsan oo dhabarka hoose ah (waa in aan la leexin). Ka dib hal lug saar dhinaca kale oo u wareeji dhinaca dhinaca ka soo horjeeda - waa inaad dareentaa inuu si fiican u fidsan yahay dhinaca kursiga iyo xagga dambe ee sinta. Kordhinta dabacsanaanta iyo dhaqdhaqaaqa muruqyadaan waxay yareyn kartaa cadaadiska dhabarka hoose sidaas darteedna waxay gacan ka geysaneysaa yareynta adkaanta dhabarka hoose. Layli jimicsiga muddo 30 ilbiriqsi ah oo ku celi labada dhinac in ka badan 3 qaybood.
Kuwani waa jimicsiyo wanaagsan oo ay habboon tahay in la sameeyo maalin kasta si ugu badnaan saameyn loogu yeesho - laakiin waxaan ognahay in maalmaha shaqada ee xiisaha badan aysan had iyo jeer oggolaan tan, sidaas darteed waan 'aqbalnaa' xitaa haddii aad maalin kasta oo kale ka qabato.
Immisa jeer baan sameeyaa jimicsiga?
Dhammaan adiga ayey kugu xidhan tahay. Raadi waxa adiga kuu shaqeynaya bilowga oo si tartiib tartiib ah u dhis laakiin hubaal inaad horay u socoto. Xusuusnow in jimicsigu u horseedi karo danqasho bilowga, maadaama aad si tartiib tartiib ah u burburinayso aagagga dhaawacan (unugyada dhaawacmay iyo unugyada nabarrada) oo aad ku beddesho unugyo jilicsan oo caafimaad qaba, oo shaqeynaya Tani waxay noqon kartaa waqti qaadasho laakiin geedi socod aad u faa'iido badan. Haddii aad leedahay baaris, waxaan kaa codsaneynaa inaad weydiisato takhtarkaaga haddii jimicsiyadan ay faa'iido kuu yeelan karaan adiga - waxaa suuragal ah inaad si taxaddar leh isugu tijaabiso naftaada. Waxaan si kale kugu dhiirigalinaynaa inaad dhaqaaqdo oo aad lugeeysid dhul qallafsan haddii ay suurtagal tahay - xor u noqo inaad aragto kuweenna YouTube kanaalka talo-siinta iyo jimicsi dheeraad ah.
Xor ayaad u tahay inaad layligaan la wadaagto saaxiibbada, saaxiibbada iyo dadka aad is garataan. Haddii aad jeclaan lahayd laylisyada loo diro dukumiinti ahaan oo leh celcelis iyo wixii lamid ah, waxaan ku weydiineynaa sida oo aad la xiriirtaa adigoo adeegsanaya bogga Facebook iyada. Haddii aad qabtid wax su'aalo ah, iska dhaaf uun nala soo xiriir.
Maxaan sameyn karaa xitaa xanuunka dhabarka?
1. Jimicsi guud, jimicsi gaar ah, iskala bixin iyo nashaad ayaa lagula talinayaa, laakiin ku joog xadka xanuunka. Laba socod maalin kasta oo ah 20-40 daqiiqo waxay u roon yihiin jirka iyo murqaha xanuun.
2. Goolal dhaliye / kubadaha duugista si adag ayaan kuugula talineynaa - waxay u yimaadaan cabbirro kaladuwan si aad si fiican ugu dhufan karto xitaa qaybaha jirka oo dhan. Ma jiro caawin kafiican oo tan ka wanaagsan! Waxaan kugula talineynaa waxyaabaha soo socda (dhagsii sawirka hoose) - kaas oo ah shay dhammaystiran oo ah 5 calaamad dhibco / kubadaha duugista oo leh cabbirro kaladuwan:
3. tababarka: Tababar gaar ah oo leh tabobar tababareed ee kuwa ka soo horjeedda (sida go'ankan dhammaystiran ee 6 jilib oo iska caabin kala duwan ah) kaa caawin kara inaad tababarto xoog iyo shaqo. Tababbarka jilitaanka badanaa wuxuu ku lug leeyahay tabobarro gaar ah oo khaas ah, taas oo iyaduna horseedi karta ka-hortag dhaawac oo wax ku ool ah iyo yareynta xanuunka.
4. Relief xanuunka - Qaboojinta: Biyo qabe waa badeecad dabiici ah oo yareyn karta xanuunka adoo si tartiib ah aagga u qaboojiya. Qaboojinta ayaa si gaar ah lagula taliyaa marka xanuunku aad u daran yahay. Markii ay dejistaan ​​ka dib daaweynta kuleylka ayaa lagula talinayaa - markaa waxaa lagu talinayaa inaad qaboojiso iyo kuleylka labadaba.
5. Relief Xanuunka - Kuleylka: Diirinta muruqyada ciriiriga ah waxay kordhin kartaa wareegga dhiigga waxayna yareysaa xanuunka. Waxaan kugula talineynaa waxyaabaha soo socda gasket kulul / qabow dib loo isticmaali karo (halkan guji si aad waxbadan uga sii akhrisato) - oo loo isticmaali karo labadaba qaboojinta (waa la qaboojin karaa) iyo kululaynta (waxaa lagu kululeyn karaa microwave).
Alaabada lagu taliyay ee xanuunka yareynta xanuunka
Biyo qabe (Cold / cryotherapy)
PAGE xiga: - Ma leedahay muruq xanuun? Waa inaad tan ogaataa!
AKHRISO: - 8 Talo Wanaagsan iyo Tallaabooyin ka dhan ah Sciatica
Dhaawac i back og qoorta? Waxaan kugula talineynaa qof kasta oo qaba xanuunka dhabarka inuu isku dayo tababbar kordhin ah oo loogu talagalay miskaha iyo jilbaha sidoo kale.
Isku day layliyadaan sidoo kale: - 6 Jimicsi Xoog oo Miskaha ka xoog badan
Sidoo kale aqri: - 6 Jimicsi Xoog Xoog Ah oo Loogu talagalay Sore Knee
Ma ogtahay in: - Daaweynta qabow waxay yareyn kartaa xanuunka xanuunka iyo kala goysyada murqaha? Waxyaabaha kale, Biyo qabe (halkan waad ku dalban kartaa), oo ka kooban inta badan alaabada dabiiciga ah, waa badeecad caan ah. Nagala soo xiriir maanta boggayaga Facebook, ka dibna waxaan xallin doonaa mid coupon dhimis adiga.
Sidoo kale aqri: - Hal koob oo biir ah ama khamri loogu talagalay lafaha adag? Haa fadlan!
- Ma dooneysaa macluumaad dheeri ah ama waxaad qabtaa su'aalo? Weydii xirfadleyaasha daryeelka caafimaad ee takhasuska leh si toos ah annaga noo ah Facebook Page.
Waxaan nahay mid adeeg lacag la'aan ah halkaas oo Ola iyo Kari Nordmann ay jawaabo uga heli karaan su'aalahooda adeeggayaga baarista bilaashka ah ku saabsan dhibaatooyinka caafimaadka muruqyada - gebi ahaanba lama yaqaan haddii ay doonayaan.
(Waxaan isku dayeynaa inaan ka jawaabno dhammaan farriimaha iyo su'aalaha 24 saac gudahood. Waxaan sidoo kale kaa caawin karnaa inaan kuu sheegno jimicsi ku habboon dhibaatadaada, kaa caawin doona inaad hesho daaweeyeyaasha lagugula taliyay, tarjumi jawaabaha MRI iyo arrimo la mid ah.)
Sawirada: Wikimedia Commons 2.0, Creative Commons, Freestockphotos iyo tabaruca aqristaha / sawirrada.
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/Tøying-av-hamstrings-og-glutes.jpg?media=1648573622 422 750 waxyeelladayda https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 waxyeelladayda2016-06-12 18:01:092022-03-18 17:25:274 jimicsi oo fidsan oo ka dhan ah dhabarka adag
4 jimicsi oo kala fidsan oo ka dhan ah qoorta adag
30 / 05 / 2016 /0 Comments/i tayada Articles, qoorta, Jimicsiga iyo Jimicsiga, Jimicsiyada xoog, iskala Layliyo/av waxyeelladayda
Miyaad dhib ku qabtaa qoorta adag? Halkan waxaa ah 4 jimicsi oo fidin ah oo kaa caawin kara inaad la dagaallanto qoorta xanuunka iyo adkaanta. Isku-fidintu waxay kordhin kartaa dhaqdhaqaaqa waxayna yareyn kartaa murqaha murqaha. Layligani waxaa si gaar ah loogu talagalay in lagu kordhiyo dhaqdhaqaaqa iyada oo ujeedadu tahay in la bixiyo shaqo wanaagsan, xanuun yar iyo tamar badan nolosha maalin kasta.
Qallafsanaan iyo qoorta oo xanuun leh runti way dhib badan tahay waxayna ka gudbi kartaa waxqabadka shaqada iyo nolol maalmeedka labadaba. Inteena badan waxyar ayaan sugaa wax yar ka hor inta aan wax ka qaban dhibaatada ka dibna waxay inta badan u gudubtay heer ay u baahan tahay dadaal dheeri ah si wax looga qabto - sidaa darteed waxaan mar walba kugula talineynaa inaad qaadatid astaamaha iyo xanuunada qoorta, si dhab ah garabkaaga u raadi oo daaweyn raadi, iyo sidoo kale inaad ku bilowdo jimicsiyo caado ah si aad dhibaatada uga hortagto. Ha u qaadan qoortaada mid la mid ah. Way kuu fiicantahay adiga, laakiin haddii ay u maleyneyso inaad wax yar ula dhaqmeyso si aan cadaalad aheyn markaa waad hubsan kartaa inay ka hadli doonto qallafsanaan, xanuun iyo madax xanuun la xiriira qoorta. Sidaa darteed waxaan kugula talineynaa inaad adiguna, jimicsiyadaan fidinta ka sokow, aad isku daydo leyliskan garabka og tallaabooyinkan wanaagsan haddii aad la halgameyso xanuunka qoorta iyo madax xanuun.
Fidinta dhinaca qoorta
A: Tani waa meesha laga bilaabayo isugeyntaan.
B: Madaxaaga dhinaca ku tuur oo u isticmaal gacantaada sidii aad u fidin lahayd fidin dheeraad ah (haddii loo baahdo). Waa inaad dareentaa inuu ku fidsan yahay dhinaca ka soo horjeedda qoorta oo waxyar hoos ugu socdo xagga sare ee garabka garbaha. Wareegtani waxay u fiican tahay kuwa ku shaqeeya maalmo dheer xafiiska xafiiska jaangooyooyinka shaqada ee muhiimka ah, iyadoo midba si gaar ah u fidayo trapezius sare. Qabo fidinta ilaa 30 sekan kuna soo celi 2-3 gogol.
2. Laabashada dhabarka ee qoorta iyo laf-dhabarka
Fadhiiso jilbahaaga hoosteeda oo dhig gacmahaaga gadaashaada. Kadib dib ugu laab dhabarka sare iyo qoorta gadaal adoo u wada qaadaya garbaha garbaha. Waa inaad markaa dareentaa inuu fidsan yahay inta u dhexeysa garbaha garbaha iyo xagga kala wareega wareega ee qoorta. Tani waa layli aad ufiican adiga oo la halgamaya dareemida 'daal' ee ka dhexeeya garbaha garbaha iyo qoorta.
Ku hay layliga 3 jeer 60 ilbiriqsi si saamaynta ugu badan loo helo. Badanaa 2-3 jeer maalintii.
3. Kala-bixinta Bisadda
Kani waa kala duwanaansho jimicsi “bisad-geel” ah oo aad loo yaqaan. Fidintaani waxay kugu habboon tahay adiga oo raba inaad xoogaa fidis ku samayso goobta shaqada ee kombiyuutarka hortiisa.
A: Gacmaha saar jilbahaaga hortooda. Kadib toosi dhabarkaaga iyo qoortaada ilaa aad dareento inuu kala fidayo inta u dhexeysa garbahaaga iyo qoortaada. Qabso 20 ilbidhiqsi.
B: Si tartiib ah u laabo qoortaada iyo laabta gadaal gadaal illaa aad ka dareento inay fidsan tahay. Si deggan u bilow oo si tartiib tartiib ah u koro. Is-fidinta ku hay 20 ilbidhiqsi oo dib ugu noqo booska koowaad mar labaad. celiyaan 3-4 gogol.
Jilibkaaga istaag oo jirkaaga horey u fidi gacmahaaga fidsan. Madaxaaga ku hay dhulka oo gacmahaaga ku kala fidiyo hortaada ilaa aad dareento fiditaan yar oo ah wareejinta qoorta iyo dhabarka kore. Wuxuu sameeyaa 3-4 set oo ah 30 ilbiriqsi.
Kuwani waa jimicsiyo wanaagsan oo ay habboon tahay in la sameeyo maalin kasta si ugu badnaan saameyn loogu yeesho - laakiin waxaan ognahay in maalmaha shaqada ee xiisaha badan aysan had iyo jeer oggolaan tan, sidaas darteed sidoo kale waan aqbalnaa haddii aad sameyn kartid maalin kasta oo kale.
Talo: Laydhka uumiga dhaqdhaqaaqa badan ee laabta
Rullaluuduhu wuxuu noqon karaa aalad waxtar leh oo wanaagsan oo loogu talagalay abaabulidda kala -goysyada iyo muruqyada laf -dhabarka - taas oo iyaduna kor u qaadeysa dhaqdhaqaaq ka wanaagsan qoorta qallafsan oo jilicsan. Talo wanaagsan oo adiga kugu habboon oo u baahan inaad "milmi" xoogaa. Saamaynta ugu badan waxaan ku talinaynaa xumbo xumbo this (halkan guji - wuxuu ka furmayaa daaqad cusub).
Dhammaan adiga ayey kugu xiran tahay. Raadi waxa adiga kuu shaqeynaya bilowga oo si tartiib tartiib ah u dhis laakiin hubaal inaad horay u socoto. Xusuusnow in jimicsigu u horseedi karo danqasho bilowga, maadaama aad si tartiib tartiib ah u burburinayso aagagga dhaawacan (unugyada dhaawacmay iyo unugyada nabarrada leh) oo aad ku beddesho unugyo jilicsan oo caafimaad qaba, oo shaqeynaya. Tani waxay noqon kartaa waqti qaadasho laakiin geedi socod aad u faa'iido badan. Haddii aad leedahay baaris, waxaan kaa codsaneynaa inaad weydiiso takhtarkaaga haddii jimicsiyadan ay faa'iido kuu yeelan karaan adiga - waxaa suuragal ah inaad si taxaddar leh isugu daydo naftaada. Waxaan si kale kugu dhiirigalinaynaa inaad dhaqaaqdo oo aad lugeeysid dhul qallafsan haddii ay suurogal tahay.
PAGE xiga: - Xanuun qoorta ah? Waa inaad tan ogaataa!
Maxaan sameyn karaa xitaa murqaha iyo xanuun muruqyada?
1. Jimicsi guud, jimicsi gaar ah, iskala bixin iyo nashaad ayaa lagula talinayaa, laakiin ku joog xadka xanuunka. Laba socod maalin kasta oo ah 20-40 daqiiqo waxay u roon yihiin jirka oo dhan iyo murqaha xanuun.
Alaabada lagu taliyay ee xanuunka yareynta murqaha iyo kalagoysyada
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/Uttøyning-av-nakken.jpg?media=1648573622 422 750 waxyeelladayda https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 waxyeelladayda2016-05-30 16:35:272022-03-18 17:24:584 jimicsi oo kala fidsan oo ka dhan ah qoorta adag
Bogga 1 ee 11123>»